تُوفر Sanford خدمات اللغة للأمريكيين ذوي الإعاقة والأفراد غير متقني اللغة الإنجليزية بدون أي تكاليف. يُرجى الاتصال بالبرنامج لمزيد من التفاصيل
“Saanfoord ameerikanota qaamaa midhamtoota fi namoota dhuufaa murtaa’ina ga’umsa afaan ingiliffa qabaniif baasii malee tajaajila a faanii nidhiyeessa. Odeeffannoo dabalataaf maaloo ulaagaa qunnamaa.”
“Afaan kee filadhu, hiikaan afaanii ni haayyamama . Hiikaa afaanii baasii maaalee siiri dhiyaata.”
“Fayyaan Saanfoordi namoota hanqina afaan ingiliffaa qabanii fi namoota qaamaa miidhamtoota kanneen gonkuma hin dhageenye, kan sirritti dhaga’uu rakkatan, qaroo dhabeeyyii yookaan miirri biroo walii hiika qabuufi yaalamuuf, barachuur fi tajaajilawwan irratti hirmaachuuf carraa waliqixa akka kennu mirakneessuuf tarkaanfiiwwan sababa qaban ni fudhata.”